DEG DEG+XOG: C/weli Gaas oo safar ugu amba baxaya dalka dibeddiisa & Dagaalo ku wajahan Somaliland xili Tukaraq uu ka dhacay – Marqaan News
Home 2018 July Wararka Maanta DEG DEG+XOG: C/weli Gaas oo safar ugu amba baxaya dalka dibeddiisa & Dagaalo ku wajahan Somaliland xili Tukaraq uu ka dhacay
DEG DEG+XOG: C/weli Gaas oo safar ugu amba baxaya dalka dibeddiisa & Dagaalo ku wajahan Somaliland xili Tukaraq uu ka dhacay
July 10, 2018 | by	marqaan | 8
Xoggo rasmi ah oo laga helayo madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas uu dhawaan safar ugu amba bixi doono dalka Belgium gaar ahaan magaalada Brussels ee caasimada dalkaasi.
Madaxweyne Gaas ayaa la sheegay in uu halkaasi kaga qayb gali doono shir weyne loog hadli doono arimaha dalka Soomaaliya kaas oo ay qayb ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladd goboleedyada.
Dr. Gaas ayaa sidoo kale inta uu ku sugan yahay magaalada Brussels ee caasimada dalka Belgium waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalkaasi iyo Jaaliyadda Puntland oo haatan si weyn ugu sii diyaar garowday soo dhoweynta madaxweynaha.
Hadaba marka laga yimaado arimahaasi waxaa iyaguna soo baxaya warar sheegaya in ka hor safarka madaxweyne Gaas ay dagaalo ku qaadi doonaan ciidamada Puntland malayshiyaadka Jeegaanta, kuwaas oo iyagu xiligani ku sugan qaybo kamid ah deegaanada Puntland oo dhawaan laga xoreyn doono.
Saraakiisha ciidamada difaaca Puntland ayaa isku raacay qorshaha dagaalka iyo nidaamka loo wajihi doono cadowga, waxaana dhawaan si toos ah u bilaaban doona hawlgalka xoreynta gobolka Sool.
iidamada difaaca Puntland ayaa iyagu xiligani ku jira heegaan xoogan, waxaana deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool hada ka taagan xaalad culus taas oo u dhaxaysa dhinacyada Puntland iyo Somaliland, walowse ay jiraan dagaalo dhex maray malayshiyaadka Jeegaanta gudahooda kadib khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay.
8 thoughts on “DEG DEG+XOG: C/weli Gaas oo safar ugu amba baxaya dalka dibeddiisa & Dagaalo ku wajahan Somaliland xili Tukaraq uu ka dhacay”
Prince of Maakhir July 10, 2018 at 3:16 pm · Edit
Ismaalaakadeedka iyo ismaleysiintu ha inoo dambeeyeen ee waaqiciga dhabta ah ayuun baa mar kasta qaalib noqda. Isbahaysigan Awal iyo Jeclo waa mid lagu saleeyay danooyin dhaqaale ee dad yar ku kooban. Qaddiyaddii Isaaqiyadu waa hore ayay iskeed u idlaatay oo waa lagu kala milmay. Xulufo labadan beelood magacooda ku qadhaabanaya ee uu Dahabshiil horseedka u yahay ayaa ka dambeeya dhul boobka deegaanada Dhulbahanta iyo Samaroonka laga wado. Damaca goobahan lala bartilmaansaday ma sahlana.
Reeraha Dhulbahante ee Woqooyiga Sool lagu bahdilayo waxaa cawaray oo ay ku dheygageen suuradeynta iyo ismaalaakadeedka jeegaanta suudhadhka iyo tayga u soo xidhay. Reerahani kalsoonida ayaa aad uga dhinsan oo weligood ba iidoorka ayaa indhasarcaadi jiray. Damiirkii iyo dareenkii baa ka zuulay oo way is dhiibeen. Miyi iyo magaalo ba geela sidiisa ayay iidoorku u ooriyaan. Dhul boobka iyo hanti boobka lala damacsan yahay way ka dhoohan yihiin. Waxaa na ugu yaabka badan lahjad uun bay u dhintaan. Marka diiradda siyaasadeed lagu daalaco isliskan Tukaraq kaga dhexeeya maaulka Jeegaaneed iyo maamulka Puntland loollanka shidaalka Soolta Woqooyi ayuu salka ku hayaa.
Ii ma muuqato qaddiyad Hartinimo oo dhab ah ee halgankani uu ku suntan yahay waayo reero Dhulbahante uun baa la isku lisayaa. Waxaa waajibku ahaa in marka hore qorshe Hartinimo ee hadaf iyo han la hanan karo leh la dajisto oo heer dhaqameed reeraha Dhulbahante ee kala irdheysan la isu soo dummo oo la isku maslaxeeyo. Cali Khaliif iyo kuwa Hargeysa ku xidhani waa tuugo iyo khaaimiin.Shacabka reerahoodan iska hurda ayay ahayd in runta iyo xaqa lagu baraarujiyo. Dhiig sokeeye oo macno la’aan Sool ugu daata maba uusan jireen haddii Dhulbahantaha laga furdaamin lahaa dulinimadan wada dayeeysiiyay ee sidaas u kala dishay. Meeday qaddiyaddii? Aaway qorshihii?
Mohammed July 10, 2018 at 3:44 pm · Edit
Hadalada dadkii dhulka jeeganta u gacan galiyay ayad ku hadashay Ninka la baxay makhir puntland shidalka ay Sool uga bahan tahay waa maxay mase ogid miyaa Puntlnd inay ledahay 1400 oo bad iyo bari ah balse ay dadka rer sool oo walahod ah ayay dhigoda iyo xolahoda u hurayan adna melaha hadal bilaa micna ah ku soo qor qor
Prince of Maakhir July 10, 2018 at 4:41 pm · Edit
Hawraarta caadifadeysan ragga waa loo dhaamaa saaxiib. Xaaladdu sida ay tahay waynu ka wada dharegsannahay. Dhiigga iyo xoolaha aad sheegtay yaa loo hurayaa? Ma Dhulbahante ayaa Dhulbahante kale loogu hiilinayaa baad na leedahay dhiigga iyo xoolaha aad sheegayso?
Waxa aniga ii muuqda ee kaa daahson aan kuu bidhaamiyo ee iga hoo. Horta Isaaq haddeer qaddiyad Somaliland la yidhaadaa isku raacsani ma jiro oo waa lagu kala booday. Labadan reerood ee isbaheystay danooyin dhaqaale ayay u roorayaan. Sidaas oo ay tahay iidoorkaasu eed ku ma leh haddii ay reeraha Dhulbahante ee deegaanka iska lihi albaabbada u ballaqeen oo hantidooda na u fasaxeen in laga halabaysto.
Dagaalkani wajiga uu leeyahay waa Dhulbahante oo dhexdooda la isku jabinayo iyo Hartiga tolkooda ah oo la kala saftay. Tukaraq waa deegaan Dhulbahante ee ay Dhulbahante kale ku soo duuleen. Waxa sababay iyo in heerkaas la isla gaaro yaa sababay? Maxaa sababay? Xalku se miyuu yahay Dhulbahante oo dhiig kala gala? Bal adigu noo sheeg.
Madaxda Majeerteen ee Puntland isu dhiidhiibaysay se haddii ay sida aad ku andacootay daacad ka ahayd maxay tobanka sano ugu qaadatay in ay arrinka Sool wax qabtaan?
Prince of Maakhir July 10, 2018 at 4:28 pm · Edit
Waxaan intaas ku darayaa in aynu inteenan gobta Harti ka dhashay mar kasta ba si taxadar leh uga foojignaano xamaasadda aan xadaariga ahayn waayo dadku waxay u kala baxaan kuwo ilbaxsan iyo kuwo kale oo ilciran. Annagu ilbaxda ayay taariikhda iyo Soomaalidu ba nagu tiriyaan oo taaj culus baa na saaran.
Waxaynu u taagannahay badbaadinta magaca Soomaaliyeed iyo diinteena Islaamka iyada oo aanay foolaxgootayn iga ahayn xaqiiqdii. Danta guud iyo jiritaanka ummaddeena waa in ay inooga qaalib ahaadaan riwaaddan ay jinnooleyaashu isu jilayaan. In hantideena la halabaysto yeeli mayno laakiin hankeenu ha sarreeyo.
Dab La Ridey July 10, 2018 at 7:26 pm · Edit
@ Suldaan Prof Cusman Cawad ”’ Royal Family ”’ May Allah Be Please With Him
Suldaan iga Guddoon Salaan sharafti lagu salaami Jiray Suldaan Cabdisalam Suldaan Mohamud Garaad Cali Shire.
Suldaan Hadalka Aad Dusha Ku Qortay waa Hadal Xaq ah waana sidaad sheegtay waa in aynu u istaagnaa Badbaadinta magaca Somaliyeed iyo Diinteena Islaamka ah
Prince of Maakhir July 10, 2018 at 9:58 pm · Edit
@ His Royal Highness Suldaan Dab La Ridey (Blessed Be He)
@His Royal Excellence Garaad Admiral Ali
Issimadayda qaddaraninta mudanoow salaamaha sharafta iyo sha’niga huwan si kal iyo laab ah ayaan idiin ka guddoonsaday, aniga oo isla iyada oo la carfiyay laydha macaan ee Eyl idiin soo marinayaa.
Ka raalli ahaada taleefoono iyo hawlo ayaa igu habsaday oo aan kaga habsaamay in aan judhii ba idiin soo jawaabo. Halganka badbaadinta ummaddeena iyo caqiiqadeeda waa aynu dhaxal u leennahay gacaleyaal. Ciddii hadlaysaa ha iska hadasho.
LIBAAXA MUDUG July 11, 2018 at 1:48 am · Edit
dhamaan akhysarta kala ah prince makhir, mohamed iyo dab la riday.
intiinuba waad saxsan tihiin, kaliya waxaad isku haysataan waa “formiladii” sool lagu xorayn lahaa
anni waxaan aamin sanahay hada in puntland wadadi cagta saartay.
jaalayaal “factors” badan baa jira sababta keentay in haatan sool loo soo baraarugo waxay ku jirtaa factorskaas.
hadaba harti oo midooba guul ciidamada ka kooban dhamaan reeraha harti.
tan kale ogaada in camey sharaxan yahay-dee ilaahay waxaan ka tuugaa in majeerteen si nabada alle uga leexiyo puntland.
haday taasi dhacdana idinku dhulbahante iyo warsan galiyoow waxaa la idiin ka fadhaa inaad keentaan wixii majeerten gabay
Cubeyd July 11, 2018 at 3:09 am · Edit
Calaacalka kabaxaya eega naflacaarigii faqashta war dagaalama waa intaas oodba dhimanba weydaane 10sano ayaad naac&habaar lafadhideen social media sidaasna dhul laguma xoreeyo saaka garoowe duleedkeeda ayaa lataagan yahay welina waad sheekeynaysaan diin&dal somaliyeed difaac idin kagama baahna kuwii xabashida&shisheeyaha horgalada u ahaa ayaad tihiine bal iidoorka saaka caasimada majeerteenya dul hoganaya wax iska dhaha Wallahi waan xishoon lahaa hadaan harti ahaan lahaa lakin afkaa idin dheer dhuubna irbad magelisaan